Ejiri nchịkọta data dị mfe site na Semalt
Nchịkọta weebụ aghọwo usoro dijitalụ dị mkpa na azụmahịa na ịzụ ahịa. Taa ndi oru choro ichoputa data n'ime nkeji ole na ole ma gbalita icho uzo kachasi nma iji mezuo ihe ha choro. The Web Scraper extension from Chrome bụ ihe ngwọta magburu onwe ya na enye ndị ọrụ ọrụ dị ịtụnanya na nsonaazụ. Ndị ọrụ adịghị mkpa ka ị nwee ike ịmepụta kọmputa ọ bụla pụrụ iche iji jiri usoro ihe omume a.
Mgbe ndị na-enyocha weebụ na-eji ngwá ọrụ a rụọ ọrụ site na iji nwee ike ịnyagharịa saịtị na data ndị ikwu m. Site n'iji ụdị dị iche iche, nchịkọta weebụ nwere ike ịnyagharịa ebe nrụọrụ weebụ iji nweta ụfọdụ data, dị ka ndepụta, ihe oyiyi, ọdịnaya, na tebụl. Karịsịa kpọmkwem, oge ọ bụla onye nchacha ahụ mepee peeji nke si na ebe nrụọrụ weebụ, ndị ọrụ ga-achịkọta ihe ụfọdụ. Iji mee nke ahụ, ha ga-pịa na saịtị ahụ site na ịhọrọ 'Nchapu'. Ọ bụrụ na ọ dị ha mkpa ịkwụsị usoro ahụ n'etiti, ha ga-emechi windo a, ha nwere ike ịchekwa data ahụ. Mgbe ahụ, a na-ebupụ data nwere ike ịpụ dị ka usoro CSV.
Nke a scrape data r dị mfe, rụọ ọrụ nke ọma, na ngwa ngwa nchịkọta siri ike. Ọ na-enye ụfọdụ uru, dịka nbudata data nke nwere ike ịgụ akụkụ data, dịka listi kọntaktị, ahịa, ngwaahịa, ozi ịntanetị na ndị ọzọ.
Wepụ ọtụtụ peeji nke iji nyochaa
Refine nyere ụfọdụ usoro dị ukwuu maka ndị ọrụ iji nwee ike ijikwa ụzọ kachasị mma ga-esi nweta data ha wepụrụ. Iji wepu ozi site na ọtụtụ ibe weebụ, anyị ga-eji usoro nzọụkwụ abụọ:
Nke mbụ, anyị ga-enweta URL niile maka ibe weebụ yana nchịkọta nchịkọta , mgbe ahụ, anyị ga-ewepu ozi sitere na ibe weebụ ndị a site na iji Nyocha. Ọ bụrụ na ibe weebụ ha chọrọ iji kpokọta data iji nye njikọ na ibe ndị yiri ya, ndị na-enyocha weebụ nwere ike iji nkwụsị ịbanye na peeji na-esote. Ndị ọrụ nwekwara ike ikpokọta ụfọdụ atụmatụ iji nwee ike ịmegharị ma daa na weebụsaịtị dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, ha nwere ike ịmepụta ndepụta nke URLs iji kpochapụ ma mebie site na nsonaazụ.